Afaka mandray an'i Erespal sy Proscan aho amin'ny fotoana iray?
Hatsarana sy fahasalamana Ny fahasalaman'ny vehivavy
Ny fitsaboana ny aretina sasany dia mitaky fitsaboana maromaro, d. Manara-maso ny fampiasana fanafody maromaro. Mandritra izany fotoana izany, ny manam-pahaizana dia tsy maintsy manisy fiheverana, na dia mifanaraka tsara amin'ny fanafody ny fanafody, na ny fampiharana azy dia hampisy vokatra mahatsikaiky ho an'ny marary. Andao hiezaka hamantatra raha toa ka azo atao ny maka fanafody toy izany tahaka an'i Erespal sy Prospan, na tsia ny famaritana ny fanafody toy izany.
Famerenana sy fampirantiana amin'ny fotoana iray ihany
Erespal dia fiomanana amin'ny fitantanana ny ratra amin'ny fototry ny hydrochloride fenspiride izay mifantoka amin'ny fatran'ny taova sy ny taova momba ny taova sy ny vokatra manaraka:
ny famindrana ny famokarana ireo voka-dratsin'ny fanehoan-kevitra mampihetsi-po sy manadrohadro;
fanesorana ranon-tsakafo marefo amin'ny bronchi;
fanafoanana ny famokarana moka.
Io fanafody io dia natao ho an'ny aretina vokatry ny aretin-kialofana ambony sy ambany (rhinopharyngitis, tracheitis, bronchitis, sinusitis, sns.), Miaraka amin'ny fiterahana ny tebiteby, kohaka, ny fananganana sekretera matevina, ary ny otitis sy ny astera bronchial. Amin'ny ankapobeny dia tendrena amin'ny fitsaboana sarotra izy miaraka amin'ny antipyretics , mucolytics, indraindray - antibiotika.
Ny Propane dia fikarakarana fanao amin'ny fikarakarana ny ratra amin'ny fofon'ny ravina ivy, izay misy vokany manaraka:
Mamporisika ny fampiasana ny Prospan ho an'ny aretina ao amin'ny tranombokim-panafody miaraka amin'ny kohaka sy ny tsiambaratelo misy tsiranoka matevina.
Ny fanendrena iraisana ny Erespal sy ny Prospan dia azo atao, satria Ny vokatry ny fanafody dia mifototra amin'ny rafitra isan-karazany ary mifameno amin'ny fitsaboana ny aretin'ny taovam-pisefoana. Tsy azo atao koa ny milaza mazava tsara izay tsara kokoa - Proshpan na Erespal, ary ny dokotera momba ny fampiasana ny zava-mahadomelina tsirairay na ny fiarahan'izy mivady dia tokony hofidiana ihany.
Smecta - ny fomba fampiharana
Afobe Aurobin - fomba fitsaboana maoderina sy tsy mahazatra
Sakana amin'ny sisin'ny sampana havia havia
Nametraka ny sandriny sy ny ranjony ho an'ny fo i Nemet
Ny flora jodophilika ao amin'ny coprogramme
Tombo-kase taorian'ny injeniera teo amin'ny fehy
Ny tsy fandidiana blepharoplasty
Tsy misy diabeta mellitus amin'ny vehivavy - soritr'aretina, fitsaboana
Mononucleoseur fitsaboana - fitsaboana
Analysis for thrombophilia
Ny endriky ny tarehy mody dia latsaka 2017 - ny volom-borona mahazatra indrindra amin'ny vanim-potoana vaovao
Fisaraka amin'ny olon-tianao
Ny fomba hianarana hatoky olona iray - toro-hevitra amin'ny psikology
Ny lafarinina amaranta dia tsara sy ratsy
Elephants Feng Shui
Platform tsy misy kofehy
I Irina Sheik, izay tera-dahy, dia maniry ny pancakes amin'ny kaviar mainty
Lasopy fitahirizana holatra - recipe
Ny vokatra avy amin'ny tarika Blood
Ahoana ny fomba hiarovana alika amin'ny tsimoka?
Recipe ho an'ny boaty kisoa
Karazan'ny Ejipsiana ao an-trano - ahoana no fomba famolavolana azy?
Kabinetra kely amin'ny TV
Ny Hydrangeas no manintona - karazany vaovao
Sakafo mofomamy amin'ny gynécologie
Ny mpanao asa tanana dia manao sary-endritsiana mahafinaritra, ary tena tsara tarehy!
Nahoana no manonofy fandevenana fandevenana?